Kupesana paNyaya yeBumbiro Idzva Koramba Kuripo
WASHINGTON — Kusawirirana pamusoro pebumbiro idzva remitemo yenyika riri kunyorwa kunonzi kuchiripo pakati pemapato ari muhurumende, kunyange hazvo pakaumbwa kakomiti kaduku kevamiriri vemapato aya kari kutarisa nezvenyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa muHarare neChipiri, kunyange hazvo mutauriri wekomiti iyi, uye vari gurukota rezvebumbiro remitemo nemabasa eparamende, VaEric Matinenga, vachiti musangano wavo wafamba nenzira kwayo.
Musangano wepiri waitwa nekakomiti aka muHarare, unonzi watadza kubuda nezvisungo panyaya dzinonzi dziri kutadza kuwiriranwa pakati peZanu PF, nemapato maviri eMDC, zvikuru panyaya yekuti voenda mberi sei nezvakabuda kumusangano weSecond All Stakeholders Conference.
Zvinonzi zviri kutadza kuwiriranwa inyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu, devolution, pamwe nenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvikwanise kuve zvizvarwa zvekune dzimwe nyika asi zvisingarasikirirwi nekodzero dzazvo.
Bato reZanu PF rinonzi riri kuda kuti nyaya idzi dzikurukurwe patsva, asi mapato eMDC ari maviri anonzi ari kuti kwete.
Kunyange hazvo paine kusawirirana uku, komiti iyi yasunga kuti isangane zvakare nemusi weChina paine tarisiro yekuti vamiriri ava vanenge vataurawo nevakuru vavo pazvinetswa izvi.